Wargeyska The Standard oo qoray in ciidanka Kenya ay dileen 75 askari oo Al-Shabaab ah
Kenya:-Ciidamada dalka Kenya ee sida xadgudubka ah uga talaabay xadka Soomaaliya ayaa sheegay in ay dileen 75 askari oo ka tirsan Ururka Al-Shabaab ka dib markii ay duuleen ku qaadeen deegaanka Qooqaani iyo Taabta .
Sida uu daabacay Wargeyska The Standard ee ka soo baxa magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa cadadkiisa soo baxay maanta waxaa uu qoray in ciidamada Kenya ee haatan ku sugan deegaanno ka tirsan gobolka Jubbada hoose sida Qooqaani Iyo Taabta ay dileen 75 askari oo ka tirsan Al-Shabaab sida uu wargeysku qoray.
Wargeyska The Standard ayaa sidoo kale qoray in ciidamada Kenya ay gacanta ku dhigeen laba qof oo ah British citizens oo asal ahaan ka soo jeeda Pakistaan iyo Soomaali sidoo kale Wargeyska The Standard ayaa sheegay in diyaaradaha dalka Kenya ay dulheehaabayaan Degmada Afmadow dagaalkana ay ku jiraan
Afahayeenka Ciidamada Raaskambooni CabdiNaasir Seeraar ayaa u sheegay Wargeyska The Standard in ay ciidamadooda ku sugan yihiin Libaax CAG oo 12Km u jirta Afmadow Roobab Mahiigaana ay hakiyeen Weerarkii ay ku qaadi lahaayeen Degmada Afmadow.
Afhayeenka Ciidamada Milatariga ee dalka Kenya Emmanuel Chirchir ayaa waxaa uu u sheegay Wargeyska The Standard in ay duulaan ku yihiin Magaalada Kismaayo ee xarunta gobalka J/hoose ayna ciidamada soo laaban doonin inta ay hadafkooda gaarayaan.
Ciidamada dalka Kenya ayaa duulaan cad ku soo qaaday Soomaaliya isaga oo marmarsiyo ka dhiganaya la dagaalanka Al-Shabaab balse leh ajando tiro badan .Ururka Al-Shabaab ayaa difaac ka galay Degmada Afmadow isaga oo ciidamadiisa ay isku qeybiyeen kooxo yar yar.
Halkan Ka Akhriso Wargeyska The Standard Cadadkiisii maanta
VOA ayaa wareysi ka qaaday aabihii dhalay wiilka Soomaaliga ee lagu qabtay Lamu hoos ka dhageyso.